5-kaarto ama sawiro cusub oo laga soo bandhigay filimka Kalank oo hadal heyntiisa sare usii qaadeen – Filimside.net
5-kaarto ama sawiro cusub oo laga soo bandhigay filimka Kalank oo hadal heyntiisa sare usii qaadeen
March 18, 2019 Zakarie Abdi
Filim soo saarayaasha kala ah Karan Johar iyo Sajid Nadiadwala ayaa adeegsanayaan qorshe ay hadal heynta filimka weyn Kalank sare ugu qaadayaan madaama ay soo bandhigeen 5-kaarto ama sawiro oo mid walbo u gaar ah hogaamiyaasha filimkan sidoo kalena hadal heyn xoogan abuureen.
Varun Dhawan doorkiisa Zafar ayaa laga soo bandhigay sawirka ama kaartada idiin muuqato oo ah asigoo Dibbi weyn la dagaalayo waxaana lasoo raaciyay qoraalkan “Zafar sheekadiisa dhameestiran waxay imaan doontaa 17 April”.
Aditya Roy Kapur doorkiisa Dev waxaa laga soo bandhigay kaartada idiin muuqato oo ah asigoo gacanta ku heesto sidoo kalena sii jeedo carro baddana ka muuqato waxaana lasoo raacsiiyay “Wajigii Dev ee darajada ka muuqato iyo sidda uu u careesan yahay.”
Alia Bhatt doorkeeda Roop ayaa laga soo bandhigay sawirka kuu muuqdo waxaana qoraal ahaan lasoo raacsiiyay “La kulan Roop-da geesiyada ah wax badanna ka ogaaw nolosheeda 17 April.”
Sonakshi Sinha doorkeeda Satya Chaudary sawirka idiin muuqdo waxaa lasoo raacsiiyay qoraalkan “Satya waa qof dareenka dunida oo idil qalbiga ku heesato sidoo kalena indhaheeda meel ayay ku jeedaan ogaaw 17 April.”
Madhuri Dixit doorkeeda Bahaar Begum sawirka kuu muuqdo ayaa laga soo bandhigay waxaana lasoo raacsiiyay qoraalkan “Bahaar waa qof sida dabeysha oo kale u dhaqaaqdo halka codkeeda codkeeda sida wabiga oo kale u qul qulo la kulan 17 April kartida ay leedahay!”
Sanjay doorkiisa Balraj Chaudary sawirka kuu muuqdo qoraalkan ayaa lasoo raacsiiyay “Balraj waa nin aan hadal badneyn balse ficilkiisa badan yahay wax ka ogaady 17 April waxa u qarsoon!”